Taliyaha Ciidanka Booliska oo kormeeray Xarunta Dambi baarista ee C.I.D oo dib u dayactir uu ka socdo. | Somali National Television - sntv.so
Home AMNIGA Taliyaha Ciidanka Booliska oo kormeeray Xarunta Dambi baarista ee C.I.D oo dib...
Taliyaha Ciidanka Booliska oo kormeeray Xarunta Dambi baarista ee C.I.D oo dib u dayactir uu ka socdo.
Muqdisho (Sntv), Taliyaha Ciidanka Booliska Soomaaliyeed, Sarreeye guuto Bashiir Cabdi Maxamed Ameeriko oo ay wehliyeen qaar kamid ah Sarreeyeyaasha iyo Saraakiisha Ciidanka Booliska, ayaa maanta kormeer shaqo ku tagey Xarunta dambi baarista CID oo ay ka socoto howlo dib u dayactir ah oo lagu sameynayo xaruntaasi.
Previous articleDuqa Muqdisho oo daahfuray Ololaha Taakulo ee bisha Ramadaan.
Next articleGobolka Banaadir oo deeq gaarsiiyay barakacayaal ku dhaqan gudaha iyo daafaha Muqdisho.